2018 kwiApple inokuzisa iindaba kuwo wonke umntu | Ndisuka mac
Ukusuka kule bhlog, esithetha ngayo yonke imihla ngayo yonke into enento yokwenza neeMacs, akunakwenzeka ukuba ungazinikeli inqaku ekubonakaliseni ukuba, kuyinyani okanye akunjalo, kungenza ilizwe leMac esaziyo ngoku litshintshe Ngo-2018.
Kucacile ukuba ukuba uCraig Federighi uxelele umlandeli kwiinethiwekhi ukuba awukho omnye umsitho oza kubanjelwa intsalela yowama-2017, yinto yokugqibela eyintloko apho iPhones ezintsha zaziswaI-Apple TV 4K entsha, ii-AirPods ezintsha ezinetyala lokungeniswa kunye neApple Watch Series 3 LTE, ibe yeyokugqibela ye-2017.
Njengoko usenokwazi, uApple wasisebenzisa ukuba sihlale sibambe umsitho ngo-Septemba wokuboniswa kwee-iPhones ezintsha kwaye ngo-Okthobha umsitho othobekileyo wesibini apho zazivela khona iindaba ezivela kwihlabathi leMac kunye neMacOS. Kulo nyaka izinto zitshintshile kwaye nangona ngeli xesha kunyaka ophelileyo uApple wasibonisa iMacBook Pro Retina entsha eneTouchBar phakathi kwezinye iimveliso ezinje ngeMac Pro eza kuthi kungekudala ithengiseKubonakala ngathi kulo nyaka izinto azizukutshintsha ngakumbi kunale nto sele siyazi namhlanje.
Ngoku, konke oku kudityaniswe nenyaniso yokuba uTim Cook ngokwakhe uthe iMac mini ayifelanga iApple isenza sicinge ukuba abo baseCupertino bagqibezela ukulungiselela into enkulu kakhulu abangakwaziyo ukuyityhila. Kungenxa yoko le nto Ndigqibe kwelokuba akusayi kubakho manqaku aphambili kulo nyaka. Ngeemveliso eziza kuphuma, le yiPod yasekhaya, i-iPhone X, kunye nefayile ye- iMac Pro, Kunye noko sele kuthengisiwe, banethuba elingaphezulu kwelitywiniweyo leKrisimesi kwaye kulapho ke kufuneka badibane khona.
Nangona kunjalo, kwiiforamu ezininzi kusithiwa i-Apple izakubangela ukubetha okutsha kwitafile ukuya kuthi ga kumxholo weMac, zombini idesktop kunye nokuphatheka, kuyachaphazeleka. Ngokunokwenzeka bayila iiprosesa zabo ezenza ukuba izicelo ezikhoyo zabaphuhlisi ziqhubeke nokusebenza ngaphandle kokuxhomekeka kakhulu kwi-Intel, inkampani eye yalibazisa ukwenziwa iimodeli ezintsha zeMac. Siyakholelwa ukuba ukusuka eCupertino badiniwe kukuxhomekeka kubantu besithathu ukuze babenakho ukumilisela iindaba kwaye bathathele ingqalelo ukuba abaphuhlisi banamhlanje babona ikamva leqonga le-Apple, iingxaki ezazikhona ngexesha lePowerPC azikho .
Oko kwathethi, kuba ndivela eMac siqinisekile ukuba kuyakubakho inkqubela phambili ebaluleke kakhulu ngokweekhompyuter zeApple. Iimpawu zibonisa ukuba iinkqubo ze-iOS kunye neMacOS ziya kuguquka kwaye ayizukuba kwimeko yokuba i-macOS iba yi-iOS kodwa i-iOS iphucule ukuya kwi-macOS. Konke oku kudityaniswe nenyani yokuba Ipensile yeApple iyimveliso ekufuneka ivalile i-ecosystem ngokusebenza neeMacs kunye neePhones., amarhe asele ejikeleza kwinethiwekhi, enza u-2018 unyaka onokubakho wehlabathi leMac.
Ngaba ukhe wema wacinga ukuba i-trackpad ye-13 kunye ne-15-intshi ye-MacBook Pros inebukhulu obukhulu, mhlawumbi umphezulu olungele ukusetyenziswa kwePensile ye-Apple?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-2018 e-Apple inokuzisa iindaba kuwo wonke umntu
Sele ndiza kuthenga iMacBook Air (2017). Ukusetyenziswa endiza kukunika kona kulula kakhulu, ngokusisiseko ndisebenzisa i-intanethi kwaye ndikhangele i-imeyile yam.
Ngaba uyazi ukuba amarhe okuba aza kuyeka ayinyani?
Okanye loluphi uhlobo lweMac ondicebise ukuba ndithenge?